ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး ခရီးသွားရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးတဲ့မည့် ကင်မရာတစ်လက်ပါပဲ။ 16mp ပုံထွက်အားရှိပြီး Wi-fi နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရိုက်ပြီးသားပုံတွေကို Smartphone သို့ Tablet သို့အလွယ်တကူ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Touch Screen function ပါဝင်ပြီး 1 sec ကို 8 ပုံနှုန်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ သူ့မှာ View Finder တော့မပါဝင်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ သီးသန့်ဝယ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 3-axis image stabilizatin စနစ်ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းလျောက်နေရင်းနဲ့တောင် ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Screen ပေါ်မှာကြည့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကို နှစ်သက်သူတွေ၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်တဲ့ Selfie အမျိုးအစားတွေကို နှစ်သက်သူတွေအတွက်လည်း အသုံးတည့်မှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ selfie ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Tripod နဲ့တွဲသုံးလို့တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။ Olympus ရဲ့ နာမည်ကြီး Art Filters တွေကို ဒီကင်မရာမှာ RAW format အနေနဲ့လည်း ရိုက်ကူးနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကင်မရာချည်းသက်သက် $599, Power Zoom 14-42mm lens နဲ့ဆိုရင်တော့ $699 ဝန်းကျင်ခန့်ရောင်းချသွားမယ်လို့…
ဇာတ်ကားအဟောင်းလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ တော်တေ်ာလေးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ မကြည့်ရသေးခင်အထိ အသစ်ပဲမဟုတ်လား :)
Director: F. Gary Gray Writer: Kurt Wimmer
Fundraising Burmese Food Fair in London by Mind to Mind Myanmar
Mind to Mind Myanmar would like to create an opportunity to meet with its existing supporters and to reach out to potential supporters through an activity which everybody can join in and enjoy. Please come along to our charity food fair to try the taste of Burmese cuisine in its authentic form and to meet with like minded others with charitable spirits for people in Myanmar.
Please check our activities at http://www.mindtomind.org/ Via: Facebook
လူမဲ့ ပစ္စည်းပို့တဲ့စနစ်ကို Google ကနေစတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ရဲ့ ပစ္စည်းပို့မည့် ပုံစံအသစ်လည်းဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်သာ တကယ်စပြီး သုံးမယ်ဆိုရင်တာ့ Delivery Driver တွေ ထမင်းငတ်မည့်ကိန်းပါပဲ :D
သြစတြေးလျက လယ်သမားတွေဆီကို အရေးပေါ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရယ် ချောကလက်တွေရယ် ရေ နှစ်ဘူးရယ် စမ်းသပ်ပြီးပို့တာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာလည်း ငှက်ပျောသီးအခွံနွှာသလို ထင်သလောက်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ ကလေးငယ်ကိုရိုက်မည့် ကင်မရာရဲ့ Function တွေကို သိထားရပါမယ်။ Auto mode, Child Mode နဲ့ရိုက်တဲ့အခါ ဝါးနေတာတို့ ဖြစ်နေရင် အလွယ်ကူဆုံးရိုက်နည်းကတော့ ကင်မရာရဲ့ shooting mode ကို auto ကနေ S mode ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။ S ဆိုတာ shutter priority mode ဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် shutter speed ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ aperture ကိုတော့ ကင်မရာကနေ auto ရွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်နေတဲ့ ကလေးကိုရိုက်မယ်ဆိုရင် S တန်ဖိုးကို 1/125 လောက်ကစပြီး ကစားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆော့နေတဲ့ကလေးဆိုရင်တော့ တန်ဖိုးကို တိုးတိုးပြီး ရိုက်ကြည့်ပါ။ 1/125 နဲ့ ဝါးနေသေးရင် 1/160, 1/250 ... စသည်ဖြင့် တိုးပေးသွားပါ။ အဲလိုတိုးတဲ့အခါ indoor မှာ ရိုက်တယ်ဆိုရင် ကင်မရာနဲ့ ISO setting ကိုလည်း တိုးပေးဖို့လိုပါလ်ိမ့်မယ်။ ISO ဆိုတာ ကင်မရာနဲ့ အလင်းစွဲအားနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ISO ကို အရမ်းမြှင့်ရင်တော့ Grain Noise တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Focus Mode ကိုတော့ auto ဒါမှမဟုတ် Continuous auto ထားနိုင်ပါတယ်။ ပြေးနေတာတွေဘာတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Continuou Mode မှာထားပြ…
eBook : သီပေါမင်းပါတော်မူ အရေးတော်ပုံ - အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား
သီပေါမင်းပါတော်မမူမီနှင့် ပါတော်မူပြီးခါစ နိုင်ငံအခြေအနေ ... ပါတော်မူရခြင်း အကြောင်းအရင်းတို့ကို နိုင်ငံခြားသားတို့က မဟုတ်မမှန် ဖော်ပြရေးသားထားမှုများအား အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျားက တုံ့ပြန်ချေပထားသော စာအုပ်
Ealing Broadway shopping centre ထဲမှာရိုက်ထားတာပါ။ အဲဒီနေရာက အိမ်နဲ့သိပ်ပြီး မဝေးလှတော့ မကြာခဏဆိုသလိုရောက်ဖြစ်တယ်။ Street Photo ကိုသဘောကျတာတစ်ခုက လူတွေရဲ့ ပင်ကိုစရိုက် သဘာဝဟန်ကို ပေါ်အောင်ရိုက်နုိုင်လို့ပဲ။ အကွက်ဆင်ပြီးရိုက်တာတွေကိုတော့ သိပ်ပြီး သဘောမကျဘူး။
မရေးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့လေးကို ဒီရှူ့ခင်းပုံလေးနဲ့အတူ ဒီနေ့ဖုန်သုတ်ပြီး ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေ တော်တေ်ာများများ Facebook ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဘလော့ကိုဘယ်သူမှစိတ်မဝင်စားကြတော့သလောက်ပဲ။ Facebook ကလည်း စသုံးခါစကတော့ သုံးချင်စရာပါ။ ဟုတ်တာရော မဟုတ်တာရော အတင်းရော သတင်းရော စုံလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပျက်စရာတွေက ပိုများလာတော့ ကြော်ငြာလုပ်ရုံကလွဲလို့ သိပ်ပြီး မသုံးချင်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ မူလအစကို ပြန်လာဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဒီဘလော့လေးကို ပစ်ထားတဲ့ကာလမှာ အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းပါပဲ။ အဓိကကတော့ Street Photo တွေရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဒီပုံကတော့ street ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်ရင်း ရှူ့ခင်းလေးလှလို့ ရိုက်ထားလိုက်တာ။ Lightroom သုံးပြီးတော့ ကာလာနည်းနည်းပြန်ပြင်ထားတယ်။ ဝေဖန်ပေးပါဦး :)
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့ကို update မလုပ်ဖြစ်တာအတော်လေးကြာသွားပါပြီ။ ဘလော့ကိုပစ်ထားပြီး Facebook နှင့် Twitter မှာပဲ ကျင်လည်နေမိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဝါသနာအရ ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်နေတော့ ဘလော့ဘက်ကို မလှည့်ဖြစ်ဘူး။ ပုံမှန်ပြန်ရေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့်လည်း အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စိတ်သိပ်ပြီး မပါသေးဘူးဗျာ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် ဒီနေရာတွေမှာ ရှိနေမယ်ဗျာ။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။
Follow me on : Website | Facebook | Twitter | Tumbler
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်ရဲ့ ယခုခေတ်နှင့်ကိုက်ညီသော ကဗျာတစ...